Ọ naghị adịwanye mfe maka ndị na-ere ahịa | Martech Zone
Igodo nke ọtụtụ njikọ m na-eso na ihe m dere na blog a bụ akpaaka. Ihe kpatara ya dị mfe… n'otu oge, ndị na-ere ahịa nwere ike ime ka ndị na-azụ ahịa jiri akara, akara ngosi, jingle na ụfọdụ ihe nkwakọ ngwaahịa mara mma (ekwenyere m na Apple ka dịkwa mma na nke a).
Usoro mgbasa ozi dị iche iche. N'aka ozo, Ndi ahia nwere ike igwa akuko a ma ndi ahia ma obu ndi ahia nke B2B aghaghi anabata ya. Ndị na-ere ahịa nwere ọwa 3 nke telivishọn mba, redio mpaghara, akwụkwọ akụkọ, bọọdụ mkpọsa, nzukọ, ibe (mbụ) Yellow Pages, pịa mbipụta na akwụkwọ ozi ziri ezi. Ndụ dị mfe.
Ugbu a, anyị nwere ọtụtụ narị ụzọ nke mpaghara telivishọn obodo na nke obodo, redio mpaghara na satịlaịtị, akwụkwọ akụkọ, ozi ziri ezi, email, weebụsaịtị, ụdị blọọgụ, blọọgụ, netwọkụ mmekọrịta na-akparaghị ókè, ọtụtụ injin ọchụchọ, ọtụtụ saịtị ntinye akwụkwọ mmekọrịta, micro-blọọgụ, Ntanetị RSS, akwụkwọ ndekọ weebụ, bọọdụ mkpọsa, mbipụta akụkọ, akwụkwọ akụkọ, iji okwu, akaebe ndị ahịa, akwụkwọ, nzukọ, ihe nkiri nkiri nkiri, telemarketing, obere ọgbakọ -pị pịa mgbasa ozi, mgbasa ozi ọkọlọtọ, mgbasa ozi mgbakwunye, wijetị, mgbasa ozi egwuregwu vidiyo, ahia vidiyo, ịre ahịa vidiyo, ịkpa agwa akparamàgwà, ịchebe ala, ahịa data nchekwa, usoro ntinye aka, njikwa aha, njikwa ndị ọrụ, ntụle, nyocha list ndepụta na-aga n'ihu ma na-aga n'ihu… na-eto kwa ụbọchị.
O di nwute, ngalaba ahia adighi etolite na oke ndi mmadu, ha adighi nma. Nakwa, usoro ọmụmụ nke nwa akwụkwọ azụmaahịa dị afọ ole na ole gafere ebe anyị chọrọ ha. Enweghị m ike ijikọ ma na-eche etu m ga - esi nwee ọnụ ahịa ahịa ahịa ga - abụrịrị mgbe ha mechara banye n'ọnụ ụzọ!
Ndi ahia choro enyemaka
N'otu oge ahụ, Intanet - aka Ozi Superhighway -, nwere echiche na akụ na-adịghị agwụ agwụ maka onye ọ bụla nwere mmasị ịza. Nsogbu bụ na echiche ndị a enweghị njedebe - na ọtụtụ n'ime ya anaghị arụ ọrụ nke ọma.
Ọ naghị adịrị ndị ahịa mfe, n’ihi ya, ha na-achọ enyemaka mgbe niile. Ma enyemaka anaghị eme ka ha na-aga ihe ha chọrọ.
Nye Ka Trust Tụkwasịrị Obi?
We ụlọ akwụkwọ ochie ndị ahịa mụtara otu esi nwalee, tụọ, nwalee ma tụọkwa ọzọ iji dozie mkpọsa anyị ma jiri ike onye ọ bụla na-eme wee hụ na nloghachi na itinye ego na-akwado ya mgbe niile. Anyị mụtara otu esi arụ ọrụ na-eme ka ọnụ ọgụgụ nke igodo anyị nwere ndị ahịa na atụmanya ma na-ebelata akụnụba niile achọrọ. Anyi amutala otu esi ewepu ihe mgbaàmà na uzu, guo ya na ngwa, ma muta ngwa ngwa na obi ojoo.
Enwere esemokwu na-eme ugbu a n'etiti ndị ndụmọdụ na-eto eto na-azụ ahịa nke ịntanetị na ndị ọkachamara azụmaahịa ochie, n'agbanyeghị. Anyị agụwo hype dị ka ọkara mgbe ọkara jụsịrị ahịa maka afọ 20 gara aga. Chọta onwe gị onye ọkachamara nke gabigara nke a ma mara otu esi ihu igwe.
Azụmaahịa gị dabere na ndị ị tụkwasịrị obi! Gbaa mbọ hụ na ndị ị tụkwasịrị obi nwere ahụmịhe dị mkpa iji gafee echiche ahụ wee banye n'ihe ga-eme ka azụmahịa gị baa uru.
Tags: ụyọkọ peeji Yellow dị iche icheMgbakwunye mgbasa oziọkọlọtọ mgbasa oziezubere iche maka omumembadamba nkumeBlọọgụbroshuọ-ịke nrụọrụ weebụimerime mmadụ ibe edokọbara saịtịndị akaebe ndị ahịanchekwa data nchekwaozi ederedeemailfree akwụkwọ akụkọọdịdị alampaghara na redio satelliteAkwụkwọ AhịaMgbakọ Ahịamicro-blọọgụobere nzukọahịa efuihe nkiri nkiriotutu engines ọchụchọtelivishọn mbaakụkọkwuo ugwo na mgbasa ozin 'akukoNtụleOzi Ntuziakanjikwa ahaNyochaRSS faili ntanetịimetelemarketingnetwọk mmekọrịta na-enweghị njedebejiri okwuonye ọrụ mepụtara ọdịnayavideo egwuregwu mgbasa oziahịa vidiyomalitere ịrịa ahịaakwụkwọ ndekọ aha weebụwhitepaperswijetị
Feb 6, 2009 n’elekere 11:14 nke abali
I kwuru eziokwu. Mgbe m gbara ikpere n'ala ala n'ọkwa nna m ukwu, amụtara m ọsịsọ na ngalaba ahụ amaghị ihe ngwa ọrụ mgbasa ozi anyị ji ekwupụta ozi anyị. Dịka onye ọrụ mmekọrịta ọha na eze, ọ na-esiri m ike ịmata teknụzụ.
Ma ọ bụrụ na e nwere otu ihe m mụtara. Ọ bara uru bụ ịmụ usoro. Legodị ihe ndị mmadụ ji agwa ibe ha okwu na ihe ha anaghị eji. N'ezie, nke ahụ na-adịwanye mgbagwoju anya mgbe anyị malitere ikewa ndị na-ege ntị.
N’ikpeazụ, echere m na ihe ndị mmadụ ji agwa ibe ha okwu dị mkpa karịa ozi a na-ezi. Ọ bụrụ na ozi ahụ dị mfe, na-eju anya, na-ekwenye ekwenye, ihe doro anya, na-emetụ mmetụta uche ma na-akọ akụkọ, mgbe ahụ nke ahụ na-eweta nloghachi ka mma na ntinye ego, nke kwesịrị ịlele na dollar na cents, kamakwa otu esi ewulite ma na-echekwa mmekọrịta.